Free Thinker: May 2019
ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမများတွင် အလွန်ထင်ရှားသည့် အဆုံးအမတစ်ခုသည် ရှိ၏။
ခန္တီပရမံ၊ တပေါတိ တိက္ခာ၊
နိဗ္ဗာနံ ပရမံ ဝဒန္တိ ဗုဒ္ဓာ။
- ဟု ဖြစ်လေသည်။ သည်းခံခြင်းတရားသည် အလွန်မြင့်မြတ်၏။ သည်းခံခြင်းတရားကိုသာ စွဲစွဲမြဲမြဲကျင့်သုံးပါက နိဗ္ဗာန်သို့ပင် ရောက်နိုင်၏ - ဟု ဆိုလိုသည်။
ဟိုဘက်ပါးကို ထိုးပေးလိုက်ပါ - မိန့်မှာခဲ့သည်။
ဤသည်တို့မှာ လူသားတို့အား သည်းခံခြင်းတရား လက်ကိုင်ထားကြရန် ဆိုဆုံးမခဲ့ကြခြင်း မဟုတ်ပါလော။
ကျွန်ုပ်တို့ ငယ်စဉ်က ကာတွန်းတစ်ပုဒ် ဖတ်ခဲ့ရ၏။
ခန္တီစ - မနိုင်၍ သည်းခံရခြင်းသည် လည်းကောင်း - ဟု ပါရှိ၏။ ကာတွန်းဆိုတော့ သရော်၍ ရေးထားတာဖြစ်၏။ မနိုင်လို့သည်းခံရခြင်းသည် သည်းခံခြင်း အစစ်မဟုတ်။ မတတ်သာ၍ အောင့်အည်း သည်းခံလိုက်ရသည်။ စိတ်ထဲကပါလို့ မဟုတ်။
အမှန်ဆိုလျှင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အားပြိုင်ကြရာ၌ အားကြီးသူက အားနည်းသူကို သည်းခံခြင်းကသာ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်သတည်း။
သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ အလွန်အင်မတန် နမူနာယူစရာ၊ လေးစားအားကျစရာကောင်းသူ တစ်ဦးသည် ရှိ၏။
၎င်းသည် သူ့ကို အမျိုးမျိုး ဒုက္ခပေးခဲ့၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သူများအား မည်သည့် အာဃာတမှမထား၊ ရန်ငြိုးမဖွဲ့။ လက်စားချေဘို့ဆိုတာ ဝေလာဝေး။ အလွန်သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်စွမ်း ရှိလှပေ၏။
သူ့လောက် အဆဲခံ၊ အဆိုခံ၊ အတိုက်ခိုက်ခံရတာ သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ရှိကောင်းမှ ရှိပေလိမ့်မည်။
သူ့ကို သူ့တိုင်းသူပြည်သားများကလည်း တိုက်ခိုက်သည်၊ ဆဲရေးသည်၊ အမနာပပြောသည်။ အတင်းတုတ်သည်။
(နိုင်ငံဂျီးသား၊ လူဂျီးလူဂေါင်းများဟု သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားနေသူများ အပါအဝင်) ကမ္ဘာ့နိုင်ငံများကလည်း တိုက်ခိုက်သည်၊ ဆဲရေးသည်၊ ရှုတ်ချသည်၊ ကန့်ကွက်သည်၊ အမနာပပြောသည်၊ အတင်းတုတ်သည်။
(တော်ကြာဆုတွေပေးလိုက်၊ တော်ကြာပြန်ရုပ်သိမ်းလိုက်။ ဟီဟိ။ လူဂျီးလူဂေါင်းတွေ ဒဲ့။ ဖွမ်)
သို့သော် ထို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ မတရားအလုပ်ခံရမှု၊ အတင်းတုပ်မှု၊ ဆဲရေးမှု၊ အမနာပပြောမှု၊ ရှုတ်ချမှု၊ ကန့်ကွက်မှုများကို သူသည် ဘာပြန်ပြောပါသနည်း။ အမှန်ဆို သူသည် သူ့ကို အတင်းတုပ်၊ ဆဲရေးနေသူများအား ဖုတ်လေသည့်ငါးပိ၊ ရှိသည်ဟု တောင် သဘောမထားပါ။ ထိုအခါ သူ့ကို ဆဲရေးတိုင်းထွာနေသူများသာ ငပေါကြီးများ ဖြစ်သွားလေတော့သတည်း။
အခါတစ်ပါးတွင် မြတ်စွာဘုရား ဆွမ်းခံသွားရာ၌ ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်က ဆွမ်းလောင်းမည့်အစား ဆဲနည်း ၁၀၁ မျိုးဖြင့် အမျိုးစုံအောင် ဆဲရေးတိုင်းထွာလေ၏။ သူဆဲလို့မောတော့မှ မြတ်စွာဘုရားက မေး၏။
ပုဏ္ဏားကြီး၊ အသင်ပုဏ္ဏားကြီးက ကျွန်ုပ်ကို ဆွမ်းလောင်းပါပြီတဲ့။ အဲဒီဆွမ်းတွေကိုသာ အကျွန်ုပ်လက်မခံလျှင် အဘယ်ကဲ့သို့ ရှိမည်နည်း။
မြတ်စွာဘုရား၊ ဆွမ်းများမှာ ကျွန်ုပ်ထံတွင်ပင် ကျန်နေပါလိမ့်မည်။
ယခုလည်း ထိုအတိုင်းပင် သင့်ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုအပေါင်းကို ကျွန်ုပ်လက်မခံ၊ ထို့ကြောင့် သင့်ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုများသည် သင့်ထံ၌သာ ကျန်နေပေလိမ့်မည်။ - ဟု မိန့်သတတ်။
ယခုလည်း သူသည် သူ့ကိုဆဲရေးတိုင်းထွာမှုများအား လုံးဝလက်မခံချေ။ သူသည် မြတ်စွာဘုရား၏ လမ်းစဉ်ကို အပြောနှင့်မဟုတ်၊ အလုပ်နှင့်သက်သေပြသူ ဖြစ်ချေ၏။
အံ့ဘွယ်သရဲပါတကား။ အထူးချီးကျူးစရာပါပေတကား။ သာမန်လူတို့ ပြုနိုင်ခဲသော အရာပါတကား။
ဤမျှဆိုလျှင် သူဘယ်သူဆိုသည်ကို ကျွန်ုပ်ဖွင့်ဟပြောနေစရာမလို။ မိတ်ဆွေတို့ အလိုလိုသိပြီးဖြစ်တော့၏။
သည်လောကတွင် သူ့လိုပြုကျင့်နိုင်သူ သာမန်လူထဲက တစ်ယောက်လောက်ရှိလျှင် ကျွန်ုပ်အား ထောက်ပြစမ်းပါ။
အခြားသူများ အဘယ်သို့ရှိသည်ဖြစ်စေ။ သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားတစ်ခုတည်းနှင့်ပင် ကျွန်ုပ်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ချစ်လည်းချစ်၏။ လေးလည်းလေးစား၏။ ကြည်လည်းကြည်ညို၏။ မြတ်လည်း မြတ်နိုးမိပါသတည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ် လူနေမှုဘဝတွင် ကိစ္စပေါင်းစုံအတွက် လူပေါင်းစုံနှင့်ဆက်ဆံကြရ၏။ ထိုအခါ ကောင်းသည့်လူနှင့် တွေ့နိုင်သလို၊ ဆိုးသည့်လူနှင့်လည်း တွေ့နိုင်၏။ စကားကို ပျော့ပြောင်းငြင်သာစွာ ပြောတတ်သူနှင့် ကြုံရနိုင်သလို၊ (ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့) စကားကို ဂွပြောတတ်သည့် လူ့ဂွစာနှင့်လည်း တွေ့ရနိုင်၏။
ထိုအခါမျိုးများတွင် မိမိစိတ်နှင့် အခန့်သင့်သည်များရှိသလို၊ မိမိစိတ်နှင့် အခန့်မသင့်သည့်အခါများသည်လည်း သေချာပေါက် ရှိပေလိမ့်မည်။ မိမိစိတ်နှင့်မတွေ့သည့်အခါ ငြိုငြင်တတ်၏။ ရန်ငြိုးဖွဲ့တတ်၏။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် စိတ်ဝမ်းကွဲတတ်၏။
တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် သည်းမခံ၊ ခွင့်မလွှတ်ပါက မိတ်ပျက်မည်။ အပေါင်းအသင်းပျက်မည်။ လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းပျက်မည်။ စီးပွားပျက်မည်။
ထိုအခါ စိတ်ဆင်းရဲရမည်။ စိတ်ညစ်ညူးရမည်။ စိတ်ရှုပ်ရမည်။ စိတ်ပူပန်သောက ရောက်ရမည်။ ငိုကြွေးရမည်။ ဝမ်းနည်းရမည်။
သည်းခံခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကိုသာ လက်ကိုင်ထားကြပါမူ သည်ကမ္ဘာလောကကြီးသည် နေချင့်စဖွယ်ကောင်းသော လောကကြီး ဖြစ်လာမည်။ သာယာလှပသော လောကကြီးဖြစ်လာမည်။ ရယ်မောသံများ သောသောညံနေသည့် ပျော်ရွှင်ဘွယ်ကောင်းသော လောကကြီးဖြစ်လာမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲတည်း။
သည်းခံခွင့်လွှတ်နိုင်ဘို့ရာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး နားလည်ဘုိ့ အရေးကြီး၏။ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး မေတ္တာထားနိုင်ရေးမှာမူ အခြေခံအကျဆုံး တရားကြီး ဖြစ်တော့၏။
အမှန်ဆို သည်းခံခွင့်လွှတ်ဘို့ဆိုသည်မှာ ခဲယဉ်းလှသော အလုပ်မဟုတ်ဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
မွေးမြူယူဘို့၊ လေ့ကျင့်ပေးဘို့၊ ပြုစုပျိုးထောင်ယူဘို့တော့ လိုပေလိမ့်မည်။
သည်းခံခြင်းဟူသည်၌ အခြားသူများကို သည်းခံခြင်းနှင့် မိမိကိုယ်ကိုယ် သည်းခံခြင်းဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။
အခြားသူများကိုသည်းခံခြင်း၌ ကဲ့ရဲ့သင်္ဂြိုဟ် အတင်းဆိုကြသည်ကို သည်းခံခြင်း၊ စော်ကားလာသည်ကို သည်းခံခြင်း၊ လာဘော၊ အလာဘော စသည့် လောကဓံတရား (၈) ပါးကို သည်းခံခြင်းတို့ ပါဝင်၏။
မိမိကိုယ်ကိုယ်သည်းခံခြင်း၌ ဆာလောင်မှုကို သည်းခံခြင်း၊ ငတ်မွတ်ခြင်းဒဏ်ကို သည်းခံခြင်း၊ ပူမှု၊ အေးမှုဒဏ်ကို သည်းခံခြင်း၊ ကိုယ်စိတ်နာကျင်မှုကို သည်းခံခြင်း စသည်တို့ပါ၏။
သည်းခံခြင်းတရား နှစ်မျိုးလုံးကို လေ့ကျင့်ယူရန် လို၏။ ရှေးကသူတော်ကောင်းများ တောထွက်တရားဓမ္မကျင့်ရာ၌ အလွန် သည်းခံရကြောင်း တွေးကြည့်ရုံနှင့် သိပါသည်။
တောထဲမှာ သစ်ပင်၊ ဝါးပင်တွေအောက်မှာနေရတာ မည်မျှ ပင်ပန်းဆင်းရဲလိုက်ပါမည်နည်း။ နေပူဒဏ်၊ မိုးရွာဒဏ်၊ ဖြုတ်ကိုက်၊ ခြင်ကိုက်သည့်ဒဏ် စသည်တို့ကိုခံရမည်။ ဆွမ်းကပ်မည့်သူ မည်သူမှမရှိ။ မိမိဘာသာ သစ်သီးသစ်ဥ၊ သစ်ဖုတို့ကို ရှာဖွေ စားသောက်ရမည်။ ဤသည်တို့ကို သည်းခံကာ ကျော်လွှားအောင်မြင်ပြီဆိုလျှင်မူ အဆုံးစွန်သော ဤလောကမှ လွတ်မြောက်ခြင်း တရားကို ရတော့သည်။ ဤကဲ့သို့သော အလွန်ထူးမြတ်လှသည့် ရတနာကိုရဘို့အတွက် သည်မျှသော ဆင်းရဲဒုက္ခတို့ကို သူတော်ကောင်းတို့သည် သည်းခံခဲ့၏။
ကျွန်ုပ်တို့မှာမူ စားစရာသောက်စရာများ အလျှံပယ်ရနေတာတောင် ဒါမစားချင်၊ ဟိုဟာမစားချင် ရှိသေး၏။ အဝတ်များ တောင်လိုပုံနေတာတောင် လှလှပပလေးတွေ့လျှင် ဝယ်လိုက်ချင်သေး၏။
ကိုယ့်ကိုမဟုတ်တာများပြောလာလျှင် ထ ထိုးလိုက်ချင်၏။ မင်းဘာကောင်လဲ၊ ငါဘာကောင်လဲ လုပ်ချင်၏။
ကိုယ်မှားနေသည့်တိုင် ကိုယ့်အမှားကိုလည်း လက်မခံတတ်။
နင်ပဲငဆ ပြောတတ်၏။ ဆဲတတ်၏။ ဆိုတတ်၏။
ကိုယ့်ဂုဏ်ကိုယ်လည်း မထောက်။ ကိုယ့်သိက္ခာကိုယ်လည်း မငဲ့ကွက်။
စိတ်ထဲရှိတာ အကုန်တုတ်ထည့်လိုက်ရမှ နေသာထိုင်သာရှိ၏။
နောက်ပြီးတော့မှ နောင်တတွေ တစ်ပုံကြီး ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်က ကျောင်းစာထဲမှာ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးအကြောင်း သင်ဖူးပါသည်။ မတ္တရာဆရာတော်ကြီး ထင်ပါသည်။
တစ်နေ့တွင် ကျောင်းသားကလေးများက ဆရာတော်ကြီးကို နှိပ်ပေးကြရာ ဒူးကိုကိုင်မိသည့်အခါ တွန့်တွန့်သွားသဖြင့် သင်္ကန်းကို လှန်ကြည့်ကြ၏။ ထိုအခါ ဒူး၌ အနာကြီးဖြစ်လျက် လောက်များ တဖွားဖွားတွယ်နေသည်ကို ကြက်သီးထဖွယ် တွေ့ကြရ၏။
ကျောင်းသားကလေးများက လောက်များကို သုတ်သင်၍ အနာကို ဆေးကြောပေးမည် ပြုသောအခါ၌ ဆရာတော်ကြီးက -
သူတို့ အသိုက်အမြုံကို မဖျက်ဆီးကြပါနဲ့။
သူတို့မိသားစုတတွေ ပျော်ပါးစားသောက်နေတာ နေကြပါစေ - ဆိုကာ အနာကို ဆေးကုမခံခဲ့။
အနာအား လောက်များတွယ်နေသည်ကို သည်းခံနိုင်ခြင်းကား တော်ရုံတန်ရုံ သတ္တိမဟုတ်။ ဆရာတော်ကြီးမှာ ထိုအနာဖြင့်ပင် ပျံလွန်တော်မူရှာလေသည်။ လူ တိရစ္ဆာန်များကို မဆိုထားဘိ။ လောက်များအပေါ်၌ပင် မေတ္တာထားနိုင်ပေသည်။ ပီဘိ သူတော်ကောင်းကြီးပါပေတည်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း မိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင် မြင်တွေ့ပြောဆိုနေကြသည်များအပေါ် သည်းခံခွင့်လွှတ်စိတ်ထားကြဘို့ရာ လိုပေလိမ့်မည်။
ကိုယ့်စိတ်နှင့် မတွေ့တာတစ်ခုတည်းနှင့် မတန်တဆ မပြောကြပါနှင့်။
ထို့ထက် တဖက်သားမခံနိုင်အောင် နင်ပဲငဆ မပြောကြပါနှင့်။
သည်းခံတတ်သည့် အလေ့အထကို မွေးမြူကြပါစို့။
ဒေါသထွက်နေချိန်တွင် စကားကိုမပြောပါနှင့်ဦး။ အောင့်အည်း မြိုသိပ်ထားလိုက်ပါဦး။
မိမိပြောလိုသည့်စကားကိုပြောရန် အနည်းဆုံး (၃) ရက်အချိန်ယူပါ။ ထိုစကားကို (၃) ရက်ကြာမှ ပြောပါ။
အသင်တို့ထင်တာထက် လောကကြီး ပိုမို သာယာလှပလာသည်ကို တွေ့ပါလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်ချစ်သော မိတ်ဆွေများအား -
အခြားသူများကို သည်းခံရန် -
မိမိကိုယ်ကို သည်းခံရန် -
ရာသီဥတုဒဏ်ကို သည်းခံရန် -
အစားအသောက်ကို သည်းခံရန် -
အစစအရာရာ သည်းခံတတ်ရန် -
လေ့ကျင့် မွေးမြူကြပါမည့်အကြောင်း -
လူအချင်းချင်း သည်းမခံခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
၃၀ မေလ၊ ၂၀၁၉
Posted by အေးငွိမျး at 6:11 PM0comments Links to this post
စိတ်ခံစားချက်များသွားပါ၍ ဤပို့စ်တွင် အနည်းငယ်ရိုင်းပြသော အသုံးအနှုန်းများပါသွားပါသည်။
ဤကဲ့သို့ရေးသားခြင်းသည် စာဖတ်သူများကို မလေးစား၍ မဟုတ်။
ဤသို့တုတ်လိုက်ရမှ ကျွန်ုပ်လက်မှာ စီးစီးပိုင်ပိုင်ရှိလေသောကြောင့် သုံးနှုန်းရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဤရိုင်းပြသော အသုံးအနှုန်းများကို များမကြာမီ ပြန်ပြင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း။
အင်္ဂလိပ်စကား၌ mutual respect ဟူသည် ရှိ၏။ မြန်မာစကားတွင်တော့ "ကျီး ဘုတ်ရိုသေ၊ ဘုတ် ကျီးရိုသေ" ဟု လာသည်။
"ကြီးသူကိုရိုသေ၊ ရွယ်တူကိုလေးစား၊ ငယ်သူကိုသနား" ဟူသည်မှာလည်း တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အပြန်အလှန် လေးစားသမှုရှိကြရန် ဆုံးမထားခြင်း ဖြစ်၏။
လူ့ဘောင်လောကတွင် အဆင်ပြေပြေ နေရေးထိုင်နိုင်ရေး၌ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားသမှု ရှိရေးသည်လည်း အလွန် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်နေ၏။
လူအားလုံးသာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနှင့် ဆက်ဆံပါက ဤကမ္ဘာလောကကြီး အလွန်သာယာလှပပေမည်။
လေးစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် အမှတ်ထင်ထင် သတိရမိနေသည်မှာ ငယ်စဉ် ဒေသကောလိပ် ကျောင်းသားဘဝက သင်ခဲ့ရဖူးသည့် "မင်းကျော်၏ ဦးအောင်ကိုး" ဖြစ်ပါသည်။ ဤဆောင်းပါးကလေးမှာ "ကျွန်တော့်ဆရာများ" စာအုပ်မှ ထုတ်နုတ် ထားခြင်း ဖြစ်၏။
ဆရာဦးအောင်ကိုးသည် ကျောင်းသားများကို လေးလေးစားစားဆက်ဆံ၏။ ကျောင်းသားများကို ကို - တပ်၍ ခေါ်၏။
တစ်ခါတွင် ဆရာဦးအောင်ကိုးအား အမှိုက်လှည်းသည့်သူနှင့် စကားပြောနေတာကို တွေ့ကြရ၏။ ဆရာ့ပုံစံမှာ ဆရာ တစ်ယောက်က ဆုံးမနေသည်ကို ခံယူနေသည့် တပည့်တစ်ယောက်ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ အမှိုက်လှည်းသူက ပြောပြနေသည်ကို ခေါင်းကိုညွတ်ကာ တလေးတစား နားထောင်နေလေ၏။ ပြီးတော့မှ အမှိုက်လှည်းသူကို ဦးညွတ်နှုတ်ဆက်ကာ ထွက်ခွာလာ၏။ တပည့်များနှင့်တွေ့သောအခါ -
"ကိုကျော်ဆွေတို့ကို ဆရာမြင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဆရာမသိတာလေးတစ်ခု ဟို အမှိုက်လှည်းဆရာဆီမှာ မေးမြန်းနေတာနဲ့ ဆရာလှမ်းနှုတ်မဆက်ဖြစ်တာပဲ။ ဆရာမသိတာ သူ့ကို မေးရတော့ သူက ဆရာ့ဆရာဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား။ ဆရာက ရှင်းလင်း ပြောပြနေချိန်မှာ တပည့်တစ်ယောက်အနေနဲ့ တခြားကို အာရုံမရောက်သင့်ဘူး မဟုတ်လားကွဲ့"
- ဟု ပြောလေသည်။ ထိုမျှသာမက -
"ဒီလိုပဲကိုကျော်ဆွေတို့ရေ၊ ငါဆရာပဲဆိုပြီး အရာရာမှာ ဆရာချည်းထင်နေလို့ မဖြစ်ဘူးကွယ့်။ လောကကြီးမှာ ကိုယ်မသိတာတွေ အများကြီးပဲ။ ဒို့ဘုရားအလောင်း မဟာဇနက္ကမင်းအောင် ကစားနေတဲ့ မိန်းကလေးကို ဆရာတင်ခဲ့သေးတာပဲကွယ်။ ခု ဆရာက အမှိုက်လှည်းဆရာကြီးကို ဆရာတင်တာ မမှားပါဘူးကွယ်နော်"
- ဟု ပြောခဲ့လေသေး၏။
မင်းဘာကောင်လဲ၊ ငါဘာကောင်လဲ သမားများ ဆင်ခြင်ကြရန် ဖြစ်ပါ၏။
လေးစားခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ် နှလုံးသားကို နက်ရှိုင်းစွာစူးဝင်ခဲ့သည့် ဆူးတစ်ချောင်းအကြောင်း ပြောပြပါရစေဦး။
ကျွန်ုပ် အသက် (၈) နှစ်လောက်က ထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အိမ်တွင် လယ်အကူလုပ်သားအဖြစ် ကိုအေးလှိုင်ကို ခေါ်ထား၏။
ကိုအေးလှိုင်က ကျွန်ုပ်တို့မောင်နှမများကို အလွန်ချစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကလည်း သူ့ကို လယ်အကူလုပ်သားအဖြစ် သဘောမထား။ အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်လိုသာ ဆက်ဆံခဲ့၏။
တစ်ခါသော် ကျွန်ုပ်တို့ရွာ၌ အလှူပွဲတစ်ခု ကျင်းပ၏။ ရွာများ၌ အလှူလုပ်သည့်အခါ တစ်ရွာလုံး မီးခိုးတိတ်လာစားကြတာ ထုံးစံ ဖြစ်၏။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းသည်မှာ ကျေးလက်တောရွာများ၌ ကလေးများကို လူဟု မသတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်၏။ ကလေးတွေမို့လို့ အနားလာလျှင် အဲဒီကလေးတွေ ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်။ သွားကြ။ တခြားသွားကစားကြ။ နင်တို့နဲ့ ဘာဆိုင်သလဲ ဟူ၏ မောင်းလွှတ်လေ့ ရှိ၏။ အလှူများတွင် ကလေးများကို မည်သူကမှ ဂရုတစိုက် သေသေချာချာ ကျွေးတာမွေးတာမရှိ။ လူကြီးတွေ အသားကုန် စားသောက်ပြီးမှ (အစကတော့ "မြိုလို့ဆို့လို့ပြီးမှ" ဟု ရေးထားသည်ကို ရိုင်းသည်ထင်၍ "စားသောက်ပြီးမှ" ဟု ပြင်လိုက်ပါသည်။ ဤသို့ပြင်လိုက်ခြင်းဖြင့် စာအရသာ အတော်ပေါ့သွားလေ၏။ ဤကား စကားချပ်) ကလေးတွေမှာ ဖြစ်သလို စားကြရတာ ဖြစ်၏။
ရွာထုံးစံအရ ကာလသားများက တစ်ယောက်လျှင် ထမင်းစားပွဲတစ်ဝိုင်း တာဝန်ယူကာ ဧည့်သည်များကို ကျွေးကြမွေးကြရ၏။ ဆိုတော့ ကိုအေးလှိုင်လည်း ထမင်းစားပွဲတစ်ဝိုင်း တာဝန်ယူ ကျွေးမွေးရသပေါ့။
ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့ လူကြီးများကို ပထမဦးစွာကျွေး၏။ ကိုအေးလှိုင်က လူကြီးများစားနေသည့်ဝိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်ကို တစ်နေရာပေးကာ ဝင်စားစေ၏။ လူကြီးဝိုင်း၌ ကလေးတစ်ယောက် ဝင်စားနေသည်ကို မြင်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်၏ ဘကြီးတော်သူ ဘကြီးငအုန်းမှာ အလွန်တရာမှ ဒေါသပုန်ထလျက် ကျွန်ုပ်ထမင်းစားနေရင်း တန်းလန်း ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းကာ အတင်း ဆွဲထုတ်လေ၏။
ကျွန်ုပ်အသက် (၈) နှစ်လောက်က ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အလွန်ခါးသီးလှသော ဤဖြစ်ရပ်ကို ယခု အသက် (၆၀) နားနီးနေသည့် တိုင် မနေ့တစ်နေ့ကကဲ့သို့ မှတ်မိနေပါသေးသည်။ ကျွန်ုပ်နေရာ၌ အသင်မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ ဝင်ရောက်ခံစားကြည့်ပါဘိ။
သို့သော် ဤဖြစ်ရပ်က ကျွန်ုပ်အား "ငါ - ကလေးတွေကို ဘယ်တော့မှ မလေးမစား မဆက်ဆံဘူး" ဟူသော ကတိကဝတ်တစ်ခုကို ပေးခဲ့လေ၏။
ကလေးများသည် နောင်တစ်ချိန် လူကြီးဖြစ်လာမည့်သူများဖြစ်၏။ လူကောင်းသူကောင်းများဖြစ်လာစေရန် ကလေးဘဝ ကတည်းက စတင် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် လို၏။ စားတာ၊ သောက်တာ၊ နေတာထိုင်တာ၊ တွေးတာခေါ်တာ၊ ပြောတာဆိုတာ၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာ အားလုံးကို သွန်သင်ညွှန်ပြပေးရမည်။ ကလေးများကို လူရာမသွင်းသော လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုသည် မည်သည့်အခါမှ သောက်သုံးကျသည့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်မလာနိုင်ဟု ကျွန်ုပ်က ရဲရဲကြီး ဆိုလိုက်ပါ၏။
နောက်တစ်ခုမှာ လူကြီးသူမများရှေ့၌သာ ခါးကုန်းပြီး အရိုအသေပေး သွားရမည်ဟု ကလေးများကို သွန်သင်သည်။ အချင်းချင်း အပြန်အလှန် လေးစားဘို့အရေး ဆုံးမထားတာကိုတော့ မတွေ့မိဟု ကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လူမျိုးများလောက် လောကနီတိအကြောင်းပြောသူ၊ ပြည်သူ့နီတိဟု ကြုံးဝါးသူ ဤကမ္ဘာပေါ်၌ မရှိနိုင်ဟု ထင်၏။ သို့တိုင် သည်လောကနီတိဆိုသည်ကို မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကျကျနန သင်ယူလေ့လာဖူးပါသနည်း။ ပြည်သူ့နီတိဆိုတာ မည်သူ သေသေချာချာ ဖတ်ရှုကျင့်သုံးဖူးပါသနည်း။
ဤကဲ့သို့ လောကနီတိ၊ ပြည်သူ့နီတိအကြောင်း မသိ၍ပင် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ရှေ့၌ ငါးအစိမ်းလာရောင်းသည့်အသည်မျိုးကို ကြုံတွေ့ကြရခြင်း ဖြစ်၏။
ကျွန်ုပ်အနေနှင့်မူ ဤဖြစ်ရပ်ကို ထူးဆန်းသည်ဟု မမြင်မိပါ။ ဤဖြစ်ရပ်နှင့် ဆင်တူကြောင်းကွဲဖြစ်ရပ်များ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေကြရတာ ဖြစ်၏။ ဤဖြစ်ရပ်မှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အပြန်အလှန် မလေးစားခြင်း၏ အကျိုးရလဒ် ဖြစ်သတည်း။
တစ်ခါကလည်း စစ်ထဲ၌ မြန်မာခွေးများကို အဘယ်ကြောင့် သုံးလုိ့မဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြထားသည့် စာတစ်ပုဒ် ဖတ်ဖူးပါသည်။
မြန်မာအိမ်များတွင် အိမ်ရှေ့ခြေနင်းခုံကို ခွေးကတက်ဟု ခေါ်၏။
ခွေးအိပ်သောနေရာဖြစ်၍ ခွေးကတက်ဟု ခေါ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဤနေရာတွင် ခွေးများအိပ်ကြရ၏။
မြန်မာခွေးများမှာ စားကြွင်းစားကျန်၊ အရိုးအရင်းများကိုသာ စားကြရ၏။ အိမ်ပေါ်ဆို၍ ခွေးကတက်ထိသာ တက်ခွင့်ရ၏။
ဆိုတော့ ခွေးများမှာ အလိုလိုနေရင်း အငုံ့စိတ် ဝင်နေ၏။
ခွေးများမှာ လူလူသူသူ (ဟုတ်ပေါင်) ခွေးခွေးသူသူ ဆက်ဆံမခံရ၍ မည်သည့်အခါမှ လူကြီးလူကောင်း (ဟိုက် - မှားပြန်ပဟ) ခွေးကြီးခွေးကောင်းစိတ်ဝင်နိုင်မည်မဟုတ်။ ကလေကချေခွေးစိတ်သာ ဝင်နေပေသည်။
အနောက်တိုင်းမှ ခွေးများမှာမူ သူတို့ကို လူကဲ့သို့ပင် တလေးတစားဆက်ဆံ၊ လူကဲ့ပင် ကျွေးမွေးပြုစုထားသည့်အတွက် သူတို့မှာ ခွေးကြီးခွေးကောင်းစိတ် ရှိသည်။ ခွေးနေမြင့်သည်။ သို့အတွက် ၎င်းတို့ကို အမိန့်ပေးလျှင် တသဝေမတိန်း လိုက်နာသည်။
သို့သော် မြန်မာခွေးများမှာ မည်မျှ အမိန့်ပေးနေသည်ဖြစ်စေ သူတို့စိတ်ရှိမှ ထလုပ်သည်။ ဤကဲ့သို့သော ခွေးများကို အလွန် အရေးကြီးသည့် စစ်ပွဲလိုနေရာမျိုး၌ မည်ကဲ့သို့ သွားသုံးရပါမည်နည်း ဟု ရှင်းပြထား၏။
(မည်သူရေးသည့် မည်သည့်စာအုပ်ဟု မမှတ်မိတော့ပါ။ မှတ်မိသူများ ပြန်လည် ဝေမျှကြပါကုန်)
ဤသည်ကိုတွေးမိတိုင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ သားသမီး၊ တူ တူမကလေးများကို တောထဲ၌ အဖြစ်ဆောက်ထားသော တက္ကသိုလ်ဟု နာမည်တပ်ထားသည့် ကလေကချေနေရာကို ပို့ပစ်ကာ ကလေကချေစိတ်ဝင်အောင် လုပ်ပစ်ရက်သော လက်သည်ခွေးမသားများ ကို ကျွန်ုပ်သည် ဖနောင့်နှင့်လည်း ပေါက်ချင်၏။ ပါးကိုလည်း ရိုက်ချင်၏။ တတောင်နှင့်လည်း ထောင်းချင်၏။ အမှုန့်ကြိတ်စက်ထဲ ထည့်ကာ အမှုန့်ကြိတ်ပစ်လျက် ခွေးစာလည်း ကျွေးပစ်ချင်မိလေ၏။
ဤကဲ့သို့သောနေရာများ၌ ကျောင်းတက်နေရရှာသည့် so call တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကို မည်သူသည် တလေးတစား ဆက်ဆံပါသနည်း။ ၎င်းတို့ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန် မပြုမူ မဆက်ဆံသည့်အခါ အသင်တို့သည်ပင် ၎င်းတို့ကို ကဲ့ရဲ့သင်္ဂြိုဟ် အပြစ်ဆိုကြသည် မဟုတ်လော။ ထိုကလေးများ လူကြီးလူကောင်းမဆန်ခြင်းသည် သူတို့အပြစ်မဟုတ်။ ထိုအနာဂတ် သားကောင်း ကလေးများကို လူကြီးလူကောင်းလို မပြုမူ၊ မဆက်ဆံ၊ လူကြီးလူကောင်းလိုမထားသည့် ထိုခွေးမသားများသာလျှင် အဓိကတရားခံ ဖြစ်လေသည်။
ဤဥပမာတစ်ခုတည်းနှင့်ပင် လူတစ်ယောက် လူလူသူသူဖြစ်လာရေး၌ ထိုသူကို တလေးတစား ဆက်ဆံရေးမှာ မည်မျှ အရေးပါလှသည်ကို အသင်မိတ်ဆွေ သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ ပြတ်ပြတ်သားသား သိမြင်နိုင်လေသည်။
ယခင်အခါ ကာလများဆီကမူ ကျွန်ုပ်မှာ အစိုးရ ရုံးပြင်ကနားသွားရမှာထက် ကျားဖင်သာ ပြေးနှိုက်လိုက်ချင်လေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သာမန်ပြည်သူများ အစိုးရရုံးများသွားသည့်အခါ မည်သူသည် သောက်ဂရုစိုက်ကာ တလေးတစား ဆက်ဆံပါသနည်း။
မည်သူကများ ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နှင့် ဆီးကြိုနှုတ်ဆက်ပါသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၎င်းတို့ရှေ့၌ မျက်နှာငယ်ကလေးများနှင့် ရပ်လျက် ကိုယ့်ဘက်လှည့်လာဘို့အရေး ဆင့်ဟိုဒင်း ခွေးမျှော်သလို မျှော်နေကြရတာ ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၎င်းတုိ့၏ပစ္စည်းဥစ္စာများကို မတရားသွားတောင်းတာလည်း မဟုတ်ပါဘဲလျက် အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဤကဲ့သို့ဆက်ဆံသည်ကို ယနေ့အထိ ကျွန်ုပ် နားမလည်နိုင်ပါ။
ဤသည်မှာ ပုံပြင်မဟုတ်။ အလွန်အင်မတန် ယဉ်ကျေးလှပါသည်ဟု အသင်တို့ထင်နေသည့် ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာပြည်ကြီး၌ အမှန်တကယ် ဖြစ်နေတာ ဖြစ်လေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည်၌ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းလောက်အောင်ပင် လေးစားခြင်းတရားများ ပျောက်ဆုံးနေလေ၏။
လူကြီးများက ကလေးများကို မလေးစား။
လူကြီးဆိုသူများက မိမိလက်အောက်ငယ်သားများကို မလေးစား။
ကျောင်းဆရာများက ကျောင်းသားကို မလေးစား။
သားသမီးများကို မိဘများက မလေးစား။
အရောင်းဆိုင်ဝန်ထမ်းများက ဈေးဝယ်သူများအား မလေးစား။
အစိုးရဌာနများက မိမိဌာနသို့ ရောက်လာသူများအား မလေးစား။
အကယ်၍ အကြင်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် တန်ဘိုးကြီးသော အဝတ်အစားများကို ပြောင်ပြောင်ယောင်ယောင်၊ လှလှပပ ဝတ်မလာဟု ဆိုငြားအံ့။ ထိုသူသည် တစုံတစ်ယောက်ထံမှ လေးစားခြင်းရဘို့ရာ မမျှော်လင့်ပါနှင့်။ ဤအရေးမှာ တုသိတာနတ်ဘုံ က နတ်သမီးကို ရည်းစားစာပေးဘို့ထက်ခက်လေသည်။
ယနေ့မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ပျောက်ဆုံနေသော နိဗ္ဗာန်ဘုံ (ဟုတ်ပေါင်) ပျောက်ဆုံးနေသော တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားသမှုတို့ကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ကြပါစို့။
အသက်ကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ငယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ရာထူးကြီးသည်ဖြစ်စေ၊ ဘာရားထူးမှ မရှိသည်ဖြစ်စေ၊ ချမ်းသာသည်ဖြစ်စေ၊ ဆင်းရဲသည်ဖြစ်စေ၊ ပညာမတတ်သူဖြစ်စေ၊ ပညာတတ်သူဖြစ်စေ။ မိမိသိသည်ဖြစ်စေ၊ မသိသည်ဖြစ်စေ။
မည်သူ့ကိုမဆို လေးလေးစားစားနှင့် ဆက်ဆံကြပါစို့ဟု -
လူအချင်းချင်း မလေးစားခြင်း၊ ကင်းရှင်းကြပါစေ။
၂၈၊ မေလ၊ ၂၀၁၉
မင်းကျော် ၏ ကျွန်တော့်ဆရာများ စာအုပ်ကို အောက်ပါ link တွင် download လုပ်နိုင်ပါသည်။
(၁) အလွန်ကြောက်တတ်သော ကျွန်ုပ်
အမှန်ဆို ကျွန်ုပ်၌ အသင်တို့ကို ပြောပြစရာများ ရင်နှင့်အပြည့်ရှိ၏။ သို့သော်လည်း ထိုအကြောင်းအရာတို့မှာ သင်တို့သိပြီးသား အကြောင်းအရာများလည်း ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင် ပျစ်ပျစ်နှစ်နှစ် ရေးပစ်လိုက်ချင်သူများလည်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း များစွာ ရှိပေလိမ့်မည်။
သို့သော် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားသူများအား အကာအကွယ်ပေးမည်ဟူသည့် ဥပဒေဟူသည် ယနေ့အထိ မမွေးသေး။ မရှိသေး။ အစအနတောင် မမြင်ရသေး။ ထိုဥပဒေ ရေးဆွဲကြမည်ဟုပင် မည်သူမှ စိတ်မကူးကြသေး။
အမှန်ကိုပြောရပါမူ မိမိစိတ်ထဲ၌ ခံစားရသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသားခြင်းကို အကာအကွယ်ပေးသည့်ဥပဒေ ဟူသည် ဤဘဒ္ဒကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံအသီးသီး၌ ယနေ့အထိ မမွေးသေး၊ မရှိသေး၊ မပေါ်ထွန်းသေး။ (ဟု ထင်ပါသည်။ အချို့ နိုင်ငံများတွင်တော့ ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်မသိပါ။) သို့တိုင် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားခွင့်၊ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် အစရှိသည်များကို လူ့ယဉ်ကျေးမှု စတင်ပေါ်ထွန်းပါပြီ ဆိုကတည်းက တစိုက်မတ်မတ် တောင်းဆိုလာခဲ့ကြတာလည်း ဖြစ်၏။ (လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့်ဟူသည် လူတစ်ယောက်ကို အခြေအမြစ်မရှိဘဲ အသားလွတ် ပုတ်ခတ်စော်ကားခြင်းကို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ကြောင်း အဆင့်အတန်းရှိသော စာများကိုသာဖတ်သည့် ကျွန်ုပ်မိတ်ဆွေများ သိပါသည်။)
ကျွန်ုပ်တို့ရင်ထဲရှိသမျှ ဖွင့်ချလိုက်၊ ရေးချလိုက်လျှင်၊ ဟိုပုပ်မ၊ သည်ပုပ်ထီးများဖြင့် အရေးယူရန် မျက်စိဒေါက်ထောက် ကြည့်နေသူများသည် ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့ကို စေတနာထားလွန်းရကား ဘာအလုပ်တစ်ခုမှ မလုပ်စေရဘဲ အစိုးရက အခမဲ့ကျွေးသည့် ထမင်းကိုစားကာ အေးအေးလူလူ နေစေချင်သူများ အလွန်ပေါများလှလေသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်မှာ အီအီးပါခြင်းကိစ္စ၊ လေယာဉ်ပျံစီးခြင်းကိစ္စ၊ ခရီးသွားခြင်းကိစ္စ၊ ထမင်းစားခြင်းကိစ္စများကဲ့သို့ မည်သည့် ပုပ်ထီး၊ ပုပ်မများနှင့်မှ မငြိစွန်းနိုင်သည့် အကြောင်းများကိုသာ ရေးထုတ်နေရချေသောဟူသတတ်။ ဒါတောင် တခါတခါ လက်လွန်သွားမိ၍ ရန်ကုန်က အစ်မကြီးက လှမ်းလှမ်း သတိပေးနေရချေလေသေး၏။
၎င်းတို့ အရှက်မရရလေအောင် ၎င်းတို့၏ အပြစ်အနာအဆာများကို မရေးသားခြင်းသည်လည်း သိတတ်ခြင်းတစ်မျိုးပင် မဟုတ်ပါလော။
သို့တပြီးကား ယခုလည်း မည်သည့်ပုပ်မနှင့်မှ မငြိစွန်းနိုင်သော အလိုက်သိခြင်းအကြောင်းကို အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာကာ ရေးသားလိုက်ရပြန်သည် တမုံ့။ (ပုပ်မကို သည်လိုစာလုံးပေါင်းရမည်၊ ဟိုလိုစာလုံးပေါင်းရမည်ဟု လာမပြောပါနှင့်။ သောက်မြင်ကပ်လွန်း၍ တမင်တကာ ပုပ်မဟု ရေးခြင်းဖြစ်၏။)
ဤဒွန္နယာကြီးသည် အလိုက်သိသူများကြောင့် အလွန်လှပရသလို အလိုက်ကန်းဆိုးမသိသူများကြောင့် အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန် ရ၏။ အလိုက်သိခြင်းအနုပညာသည် ဘဝနေနည်းအနုပညာ၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏။
အလိုက်သိခြင်းကို ကျောင်းမှာစာသင်သလို သင်ပေးလို့ရတာမျိုးမဟုတ်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက လူကြီးမိဘများက လူ့ဘဝတွင် မည်ကဲ့သို့ နေရမည်၊ ထိုင်ရမည်ကို ဖြည်းဖြည်းချင်း သင်ပေးရာမှ ရလာသည့် အကျိုးအမြတ်ဖြစ်၏။ လူ့လောကတွင် နေနည်း၊ ထိုင်နည်းတတ်သွားပြီဆိုပါက အလိုက်သိခြင်းပညာကို အလိုလိုတတ်သွားလိမ့်မည်။
အလိုက်သိတတ်ခြင်း နောက်တစ်ကြောင်းမှာ ထိုသူ၏ ကြောင်းကျိုးဆီလျော်အောင် တွေးတတ်၊ ခေါ်တတ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ် ယူဆပါသည်။ လူတစ်ဦး၏ ပညာဉာဏ်ရှိမှုနှင့် အလိုက်သိတတ်မှုတို့မှာ တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေလိမ့်မည်ထင်၏။
အလိုက်မသိတတ်သူများကား မည်မျှပင် ပြောနေသည်ဖြစ်စေ။ တဲ့တဲ့ပြောတာတောင် အလိုက်သိမလာသည်ကိုလည်း မျက်မြင် ကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့ရပါ၏။ ကျွန်ုပ်မှာ ထိုသူများကိုကြည့်ပြီး များစွာအံ့သြတမောဖြစ်ရသော ဟူ၏။
သို့ဆိုလျှင် မည်သည်ကို အလိုက်သိသည် ခေါ်ပါသနည်း။
အလိုက်သိခြင်းမှာ အလွန်ကျယ်ပြန့်လှ၏။ အလိုက်သိခြင်းကို အဓိပ္ပာယ်ဖော်ရခက်ပါသည်။
အခြားသူများ၏ အကျိုးကို မျှော်ကိုး၍ မိမိ၏ ကာယကံမှု၊ ဝစီကံမှု၊ မနောကံမှုတို့ကို ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ပြုမူပြောဆိုလုပ်ကိုင်ခြင်း အား အလိုက်သိသည် ဟု ခေါ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ တခြားသူမခိုင်းရဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကူးနှင့်ကိုယ် သင့်တော်မည်ထင်သည့်၊ လိုအပ်မည် ထင်သည့်၊ အဆင်ပြေမည် ထင်သည့်အရာကို လုပ်ပေးခြင်းကို အလိုက်သိသည်ဟု ခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ လုပ်သင့် လုပ်ထိုက်တာကို မိမိစိတ်ကူးနှင့် လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်၏။
သို့သော် မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာကို မလုပ်ခြင်း၊ မပြောသင့်မပြောထိုက်တာကို မပြောခြင်းသည်လည်း အလိုက်သိခြင်းပင်ဖြစ်၏။ ရှေးပညာရှိများ၏ ဆုံးမစာများတွင် အလိုက်သိခြင်းကိစ္စများ အများအပြားပါ၏။
အလိုက်သိခြင်း နမူနာတို့ကိုပြရလျှင် အောက်ပါတို့ဖြစ်၏။
Ø တစ်ယောက်ယောက် အိပ်နေစဉ် အနှောင့်အယှက်မဖြစ်အောင် တိုးတိတ်ငြင်သာစွာ လှုပ်ရှားလုပ်ကိုင်ခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်းဖြစ်၏။
Ø ကျေးလက်တောရွာများမှလူများ ရန်ကုန်သို့ ဆေးကုသရန်လာရာတွင် သူများအိမ်၌ တစ်လ၊ ကိုးသီတင်း တည်းခိုရမည် ဖြစ်ရာ မိမိတို့အတွက် ဆန် စသည့် စားနပ်ရိက္ခာများ သယ်လာခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်းဖြစ်၏။
Ø အခြားသူများ အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် စကားကို တိုးတိတ်ငြင်သာစွာ ပြောခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်းဖြစ်၏။
Ø ကား၊ ရထား။ သင်္ဘောပေါ်များ၌ မိမိထက် ပိုလိုအပ်သူ (သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်မစွမ်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်၊ ကလေး စသည်) များကို မိမိ၏ ထိုင်ခုံနေရာပေးခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်းဖြစ်၏။
Ø အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခြားသူများအိမ်တွင် တည်းခိုနေထိုင်ရစဉ် သန့်ရှင်းရေးစသော အိမ်ဝေယျာဝစ္စများကို မိမိဘာသာ လုပ်ကိုင်ပေးခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်းဖြစ်၏။
Ø လမ်းလျှောက်သည့်အခါ လမ်းကို ပိတ်မလျှောက်ဘဲ တစ်ဘက်ကပ်ကာ အခြားသူများအား လမ်းပေးခြင်းသည် အလိုက်သိခြင်း ဖြစ်၏။
အလိုက်သိခြင်း၏ ဆန့်ကျင်ဘက်မှာကား အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သတည်း။
သို့ဆိုလျှင် မည်သည်တို့သည် အလိုက်ကန်းဆိုးမသိတတ်ခြင်း ဖြစ်ဘိသနည်း။
တစ်ယောက်ယောက်နှင့် စကားပြောနေစဉ် သူ့စကားကို စိတ်မဝင်စားဘဲ ဟိုကြည့်သည်ကြည့် ကြည့်လိုက်၊ ဟိုသည် ထသွားလိုက်။ တခြား မဆိုင်တာတွေ လျှောက်ပြောလိုက်လုပ်ခြင်းသည် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိခြင်းဖြစ်၏။
ဆရာဆရာမ စာသင်နေစဉ် ဝါးကနဲ အကျယ်ကြီးသမ်းခြင်းသည် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိခြင်းဖြစ်၏။
သူများ ကြိုက်မှန်းမသိ၊ မကြိုက်မှန်းမသိ။ ခွင့်မတောင်းဘဲ သူ့အခန်းထဲ စွပ်ကနဲဝင်ခြင်းသည် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိခြင်းဖြစ်၏။
အလိုက်သိသူများသည် လူများတန်းစီနေသည်ကို ကြားမှ ဖြတ်ဝင်ဘို့ ကြိုးစားမှာမဟုတ်။
အလိုက်ကန်းဆိုးမသိသူများမှာမူ ကားပေါ်ကို သူ့ထက်ငါ အတင်း အလုအယက် တိုးဝှေ့တက်ကြလေသည်။
အခြားသူများနှင့် ကျပ်ပြူးပြီး ရောထိုင်နေရစဉ် အလိုက်သိသူများက မိမိကိုယ်ကို အသာကျုံ့ထိုင်နေသခိုက် အလိုက်ကန်းဆိုး မသိသူများကား ဖြဲကားကာ ထိုင်နေတတ်ကြ၏။
အလိုက်သိသူများသည် အခြားသူများကို ဦးစားပေး၏။
အလိုက်ကန်းဆိုးသိသူများကတော့ ကိုယ်ရဘို့သာ အရေးကြီးလေသည်။
သို့သော် အလိုက်သိခြင်းကို ဖားတာနှင့် ရောမချပါနှင့်။ အချို့လူလည်ကြီး သားသမီးများမှာ အလိုက်သိခြင်းနှင့် ဖားခြင်းကို ရောပစ် တတ်ကြ၏။
လူကြီးလာလို့ ကားတံခါးအတင်းပြေးဖွင့်ပေးခြင်းကို ကျွန်ုပ်ကတော့ အလိုက်သိခြင်းထဲတွင် မထည့်လိုပါ။
(အတော်များများကတော့ ဤသည်ကို သာယာနှစ်သက်တတ်ကြ၏။ သို့သော် ဤအပြုအမူကို သာယာနှစ်သက်သူများထဲတွင် ကျွန်ုပ်မပါပါ။ ဤသည်မှာ လူများထမ်းသည့် ဝေါပေါ်တွင် လိုက်ပါဇိမ်ခံလိုသော ပဒေသရာဇ်စနစ်၏ ဆိုးမွေများဖြစ်သည်ဟု ကျွန်ုပ်ကတော့ စွပ်စွဲချင်ပါသည်။ စကားစပ်မိ၍ ပြောရလျှင် ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကလူများမှာ အတော် - င်ခေါင်းကျယ်လှ၏။ ကားကို ကိုယ်တိုင်မမောင်း။ ဒရိုင်ဘာခန့်ထားပြီး မောင်း၏။ နောက်တော့ ဖူးဖူးမှုတ်ထားသော သမီးကလေးမှာ ဒရိုင်ဘာနှင့် ငြားတော့၏။)
မန္တလေးမှာနေသည့် ဆရာမကို ရန်ကုန်သို့ပြောင်းခြင်း။ ရန်ကုန်တွင်နေသည့် ဆရာမကို တောင်ကြီး၌ နေရာချထားပေးခြင်း။ မော်လမြိုင်မှာ မိသားစုနှင့် အခြေကျနေသည့် ဆရာမကို ရခိုင်သို့ပို့ခြင်းကား အလွန်ကြီးမားလှစွာသော အလိုက်မသိခြင်း သို့မဟုတ် မိုက်မဲခြင်း သို့မဟုတ် ရူးသွပ်ခြင်းပင် ဖြစ်ပေတော့သတည်း။
(၃) အလိုက်သိခြင်း၊ စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်းနှင့် ယဉ်ကျေးခြင်းတို့ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ဆက်စပ်နေပုံ
အလိုက်သိခြင်းနှင့် စည်းကမ်းသေဝပ်ခြင်း၊ ယဉ်ကျေးခြင်းတို့သည် ဒင်္ဂါးပြားတစ်ပြား၏ ခေါင်းနှင့်ပန်း ဖြစ်၏။ အလိုက်သိသူများ သည် စည်းကမ်းသေဝပ်သူများ၊ ယဉ်ကျေးသူများဖြစ်၏။
အလိုက်သိသူများသည် မိမိဖွထားသော အမှိုက်များကို မိမိဘာသာ ရှင်းသွားသည်။
အလိုက်မသိသူများမှာမူ အမှိုက်များကို တွေ့ကရာပစ်သည်။ ဤသည်မှာ စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် အလိုက်မသိခြင်းနှင့် စည်းကမ်းမဲ့ခြင်းမှာ ဆက်စပ်နေသည် ဟု ကျွန်ုပ်ဆိုခြင်းဖြစ်၏။
တစ်ယောက်ယောက် စကားပြောနေသည်ကို ချောင်းနားထောင်ခြင်း၊ တစ်ယောက်ယောက် ဖုံးပွတ်နေသည်ကို ဘေးမှ ကြည့်နေခြင်း၊ အခြားသူတစ်ယောက်၏ စာကို ဖွင့်ဖတ်ခြင်း စသည်တို့မှာ အလိုက်မသိခြင်းမှ ဆင်းသက်လာသည့် မယဉ်ကျေးမှု များဖြစ်၏။
အလိုက်သိသူများလာလျှင် စည်းကမ်းရှိသူ၊ ယဉ်ကျေးသူ များလာမည်။
စည်းကမ်းရှိသူ၊ ယဉ်ကျေးသူ များလာပါက လူတို့၏ ကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။
ထိုအခါ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်း မြင့်မားလာမည်။
ကျွန်ုပ်ဆိုလိုသည့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သည်ဆိုခြင်းမှာ တိုက်ကြီး ကားကြီးတွေနှင့်နေရခြင်းကို ပြောခြင်းမဟုတ်။
၁၅ ထပ်တိုက်ပေါ်မှာနေပြီး အပေါ်က ကွမ်းတံတွေးထွေးချသူကို လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သည်ဟု အသင်ထင်ပါသလား။
သိန်း ၂၀၀၀ တန်ကားကြီးပေါ်မှနေ၍ လမ်းမပေါ်သို့ ကွမ်းတံတွေးထွေးချသွားသူကို လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သူဟု ဆိုနိုင်ပါမည်လား။
အိမ်ကြီးဟီးနေအောင် ဆောက်ထားသော်လည်း ရေများကို အတိုင်းအဆမရှိ သုံးဖြုန်းနေသူကို လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်သည် ဟု ခေါ်နိုင်ပါမည်လား။
သိန်း (၇) သောင်းလောက်တန်သော ခြံကြီးဝင်းကြီးထဲမှာနေပြီး အိမ်အကူကောင်မလေးကို ဆီပူနှင့်လောင်းသူသည် လူနေမှု အဆင့်အတန်းမြင့်သူ ဖြစ်ပါသလား။
လူ့လောကတွင် နေထိုင်စဉ်၊ အထူးသဖြင့် အခြားသူများနှင့် အတူနေရစဉ် အလိုက်သိခြင်းသည် အလွန်အရေးကြီးလှ၏။
ရှေးအခါက တစ်ကျောင်းတည်း၌ အတူနေကြသော ဆရာတော်ကြီးနှစ်ပါးမှာ အလွန်တည့်သည်ဆို၏။
အခြားသူများက ၎င်းတို့ အဘယ်ကြောင့်သည်မျှတည့်ကြောင်း တအံ့တသြ မေးမြန်းလျှောက်ထားကြ၏။
ထိုအခါ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးက "တပည့်တော်က ဦး . . . . . မကြိုက်တာ ဘာမှမလုပ်ဘူး။ သူ့အကြိုက်ပဲ လိုက်လုပ်တယ်" ဟု ဖြေ၏။
နောက်ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကို မေးပြန်ရာတွင်လည်း အလားတူပင် "တပည့်တော်က ဆရာတော် ဦး . . . . . မကြိုက်တာ ဘာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူး။ သူ့အကြိုက်ပဲ လိုက်လုပ်တယ်" ဟု ဖြေသည်ဆို၏။
တစ်ဦးမကြိုက်တာ တစ်ဦးမလုပ်သူများသည် အဘယ်မှာလျှင် မတည့်စရာ ရှိပါမည်နည်း။
ဤသည်မှာ အလိုက်သိခြင်း၏ ကြီးစွာသော စံပြနမူနာ ဖြစ်ပါသည်။
အလိုက်သာသိပါက စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ချမ်းသာနေရသည်ဟူသော ပြယုဂ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က အသင်တို့အား အလိုက်သိသူများဖြစ်လာကြစေရန် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြုစုပျိုးထောင်ကြဘို့၊
ထို့ထက် မိမိတို့၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များကို အလိုက်သိသူများဖြစ်လာကြစေရန် အရေးတကြီး ပြုစုပျိုးထောင်ကြဘို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါကြောင်း။
လူအချင်းချင်း အလိုက်သိခြင်း ကင်းရှင်းကြ ကြ . . . (ဟုတ်ပေါင်) မွှားကုန်ပြီ။ ဆောရီး ဆောရီး။
လူအချင်းချင်း အလိုက်မသိခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ။
Posted by အေးငွိမျး at 8:04 PM0comments Links to this post
ညာတာ ပါတေး (၃)
စင်ကာပူလာမည့်အလုပ်သမားများအနေနှင့် IPA letter ကို စင်ကာပူထွက်မလာမီ အနည်းဆုံး ၃ ရက်ကြို၍ ရထားရမည်။ သို့မှ IPA letter ထဲတွင် ဖော်ပြထားသည့် လိုအပ်ချက်များကို ကြိုတင်စီစဉ်နိုင်မှာ ဖြစ်၏။ သို့သော် များသောအားဖြင့် အေးဂျင့်များက IPA letter ကို စင်ကာပူလာခါနီးမှ လက်ထဲထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်၏။ IPA letter ရလာပြီဆိုတော့လည်း မည်သူကမှ ရေရေရာရာ ဖတ်ကြည့်ကြတာမဟုတ်။ သည်လောက် အရေးကြီးမှန်းလည်း မသိ။ ဘာတွေရေးထားမှန်းလည်း မသိ။
IPA letter ထဲတွင် စင်ကာပူမြေပေါ် ခြေချအပြီး (၁၄) ရက်အတွင်း လုပ်ရမည့်ကိစ္စများကို ဖော်ပြထား၏။ အကျဉ်းချုပ်ရလျှင် -
၁။ ဆေးစစ်ရမည်။ ဆေးအောင်ရမည်။
၂။ SIP (Settling-In Programme) သင်တန်းတက်ရမည်။
၃။ Safety သင်တန်း (ACS (Applied Workplace Safety and Health in Construction sites) သင်တန်းတက်ရောက် အောင်မြင်ရမည်။
အလုပ်စဝင်ပြီဆိုတော့ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအကြား နှစ်ဦးသဘောတူ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပေါ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ကြရသည်။ ဤသည့်စာချုပ်မှာလည်း မိမိအတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤစာချုပ်တွင် ဤကုမ္ပဏီ၌ အလုပ်လုပ်နေစဉ် လိုက်နာ ရမည့် စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်းအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။ မိမိအကြောင်း ရေးထားသည့်စာချုပ်ဖြစ်၍ ကိုယ့်ဆီမှာ စာချုပ်တစ်ခုရှိရမည်။ မိတ္တူမဟုတ်။ မူရင်းဖြစ်ရမည်။
အမှန်ဆို ထိုကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို စင်ကာပူမလာမီကတည်းက အလုပ်သမားထံ ပို့ရန် MOM ကညွှန်ကြားထားပါသည်။ သို့မှ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပါ အချက်အလက်များကို သိရှိကာ၊ ထိုစာချုပ်ပါ အချက်များကို မကြိုက်ပါက မလာလိုက မလာဘဲနေရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၆ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှစကာ အလုပ်ရှင်သည် စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားသည့် Key Employment Terms ကို အလုပ်သမား အား ပေးရမည်။ KET (Key Employment Terms) ထဲတွင် အချက် (၁၈) ချက်ပါရာ ထိုအထဲ၌ အောက်ပါတို့ပါဝင်သည်။
v အလုပ်လုပ်ရမည့်ရက်၊ အလုပ်ချိန်၊ နားရက်
v လစာကိုမည်ကဲ့သို့ပေးမည်။ မည်သည့်နေ့ရက်တွင်ပေးမည်။
v အချိန်ပိုဆင်းရမည့်ရက်များနှင့် အချိန်ပိုကြေးကို မည်ကဲ့သို့ပေးမည်။
v ဆေးကုသခြင်း၊ ဆေးကုသစရိတ်များကို မည်ကဲ့သို့ပေးမည်။
v မည်သည့်ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံဆေးခန်းများတွင် ဆေးကုသရမည်။
v ဆေးခွင့်၊ လုပ်သက်ခွင့်၊ လစာမဲ့ခွင့်။
v အလုပ်ဖြုတ်လျှင်၊ အလုပ်မှထွက်လိုလျှင် တင်ကြိုအကြောင်းကြားရမည့် ရက် (နှစ်ပတ်၊ တစ်လ စသည်) -
အလုပ်သမားအနေနှင့် မိမိနှင့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေသည့် ထိုအကြောင်းအရာအားလုံးကို သေသေချာချာ သိထားရန်လို၏။
အချို့ ယုတ်ပတ်သော အေးဂျင့်များမှာ အလုပ်သမားများ စင်ကာပူရောက်ပြီဆိုသည်နှင့် လေဆိပ်ထဲတွင်ပင် ထို ကန်ထရိုက်စာချုပ် ကို အတင်းအကျပ် လက်မှတ်ထိုးစေသည်။ နောက်ပြီး ထိုစာချုပ်ကို ပြန်သိမ်းသွား၏။ အလုပ်သမားများမှာ မိမိတို့ ဘာကို ဘယ်လို လက်မှတ်ထိုးလိုက်ရမှန်းတောင်မသိ။ ဘာစာရွက်တွေမှန်းလည်း မသိ။ KET နှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ဆိုတာ မြင်တောင် မြင်ဖူးတာ မဟုတ်။ ရှိမှန်းတောင် မသိရ။ ဤသည်မှာ ညာတာပါတေး ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုပါက အဘယ်ကြောင့် ဤ KET ကို အလုပ်သမားအား မပေးရမည်နည်း။ အမှန်ဆို KET ၌ ဘာတွေရေးထားသည်ကို အလုပ်သမားများအား ရှင်းပြရမည်။
အကယ်၍ မိမိအလုပ်ရှင်က ထို KET နှင့် ကန်ထရိုက်စာချုပ်ကို မပေးခဲ့ပါက MOM သို့တိုင်ပါ။ ဖုန်းနံပတ် ၆၄၃၈ ၅၁၂၂ ဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်ုပ်ကြည့်ရသော ကန်ထရိုက်စာချုပ်တစ်ခုထဲ၌ အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်များတွင် အလုပ်ဆင်းပါကလည်း တစ်ဆသာ ရမည်ဟု ဖော်ပြထား၏။ ဤသည်မှာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်၏။
အများပြည်သူရုံးပိတ်ရက်၌ အလုပ်မဆင်းရပါက သာမန်လုပ်အားခ (၈) နာရီစာ ရရမည်။ အလုပ်ဆင်းရပါက (၁၆) နာရီစာ ရရမည် ဖြစ်၏။
(၇) အလုပ်သမားထံမှ ငွေကြေးတောင်းခံခြင်း မပြုနိုင်သော ကိစ္စများ
အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားထံမှ အောက်ပါအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ငွေကြေးတောင်းခံခြင်း၊ လစာထဲမှ ဖြတ်တောက်ခြင်း မပြုရ။
၁။ ဤကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ခန့်ထားရသည် ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်
၂။ ဝပ်ပါမစ်သက်တမ်းတိုးရန်ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်
၃။ Security deposit $5000 တင်ထားရ၍ ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်
၄။ Medical Insurance $15000 ဝယ်ထားရ၍ ဟူသော အကြောင်းပြချက်ဖြင့်
၆။ အစိုးရက မဖြစ်မနေတက်ခိုင်းသည့် သင်တန်းများအတွက် (ဥပမာ - CSOC, ယခု ACS (Applied WSH in Construction sites)
၇။ ကန်ထရိုက်စာချုပ်ပြည့်ပြီး မြန်မာပြည်ကို အပြီးပြန်သည့်အခါ ပေးရသော လေယာဉ်လက်မှတ်ခ
၈။ ကုမ္ပဏီကသာ ပေးရမည့် အခွန်အခများ
ထို့ကြောင့် မိမိလခထဲက ဖြတ်ထားတာတွေ့လျှင် ကုမ္ပဏီကို မေးကြည့်ပါ။ ဘာအတွက် ဖြတ်တာလဲ။
အကယ်၍ အထက်ပါ (၈) ချက်ထဲက တစ်ခုခုအကြောင်းပြချက်နှင့် ဖြတ်သည်ဆိုလျှင် ပိုက်ဆံ ပြန်တောင်းပါ။
အကယ်၍ ပြန်ပေးဘို့ ငြင်းဆန်နေလျှင် MOM သို့မဟုတ် MWC (ဖုန်း - ၆၅၃၆ ၂၆၉၂) သို့ တိုင်ပါ။
နောက် ညာတာပါတေးတစ်ခုက ဆေးကုသစရိတ်များဖြစ်၏။
နင်တို့နော်၊ ဖျားလို့နာလို့ ဆရာဝန်ဆီသွားရင် အဲဒီဆေးဘိုးဝါးခတွေ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပေးရမှာ။ ကုမ္ပဏီက အက်ဆီးဒင့်ဖြစ်လို့ ဆေးရုံတက်တဲ့အခပဲ ပေးမှာ ဟု မြန်မာပြည်က အေးဂျင့်များက မှာလိုက်သည် ဆို၏။ အဲသဟာ အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားကိစ္စဖြစ်၏။ အဘယ်ကြောင့် ၎င်းတို့က ပါချင်ရသနည်း။ မသိလျှင်လဲ ဘာမှ မပြောပါနှင့်။ ဒါ နင်တို့အလုပ်မဟုတ်။
အလုပ်သမားတစ်ဦးစီအတွက် ကုမ္ပဏီက တစ်နှစ်စာ တစ်သောင်းခွဲတန် ဆေးအာမခံ ဝယ်ရ၏။ ဤသည်မှာ ဥပဒေဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် မည်သည့်ကိစ္စကြောင့်မဆို ဆရာဝန်ပြခြင်း၊ ဆေးခန်းပြခြင်း၊ ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ဆေးစစ်ခြင်းအားလုံးကို ကုမ္ပဏီက ကျခံပေးရသည်။ အမှန်မှာ ထိုပိုက်ဆံကို ဆေးအာမခံထဲမှ ပေးချေခြင်းဖြစ်၍ ကုမ္ပဏီအနေနှင့် ဘာမှ နစ်နာစရာ အကြောင်းမရှိ။ အလုပ်သမားတစ်ဦး၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် တစ်နှစ်လျှင် စင်းဒေါ်လာ တစ်သောင်းခွဲထိ သုံးခွင့်ရှိ၏။
အကယ်၍ တစ်သောင်းခွဲထက်ကျော်သွားလျှင်မူ ထိုကျော်သွားသည့် ပမာဏ၏ အချို့အဝက်ကို အလုပ်သမားအား ကျခံစေခိုင်းနိုင် သည်။ အဘယ်မျှ ကျခံစေရမည် ဆိုသည်ကို ကန်ထရိုက်စာချုပ်ထဲ၌ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရေးထားရမည်။
(၈) လုပ်ငန်းခွင် မတော်တဆမှုအတွက် ခံစားခွင့်
ကာယလုပ်သားများ (လခမည်မျှရသည်ဖြစ်စေ)၊ လခ ၁၆၀၀ နှင့် အောက်ရသော ကာယလုပ်သားမဟုတ်သူများအတွက် ကုမ္ပဏီက လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုအာမခံ ဝယ်ထားရ၏။ ဝပ်ပါမစ် သို့မဟုတ် S Pass လျှောက်သည့်အခါ သို့မဟုတ် သက်တမ်းတိုးသည့်အခါများတွင် ကုမ္ပဏီသည် မတော်တဆမှုအာမခံဝယ်ထားသည့် အာမခံကုမ္ပဏီနာမည်၊ ပေါ်လစီနံပါတ်၊ အာမခံ စတင်သက်ရောက်သည့်နေ့၊ အာမခံ သက်တမ်းကုန်သည့်နေ့ စသည်တို့ကို ဖော်ပြရ၏။
အလုပ်ခွင်၌ မတော်တဆမှုဖြစ်ပါက Work Injury Compensation Act အရ အလုပ်သမားအနေနှင့် ခံစားခွင့် သုံးမျိုးရှိ၏။
ဆေးခွင့်၊ ဆေးရုံတက်ခွင့်ရက်များ ဆိုသည်မှာ အခြေခံလစာကို ခံစားခွင့်ရှိသော ခွင့်ရက်များဖြစ်၏။
ပြင်ပလူနာ ဆေးခွင့်ကို တစ်နှစ်လျှင် ၁၄ ရက်။ ဆေးရုံတက်ခွင့် အရက် ၆၀ ရသည်။
ထိုရက်များထက်ပိုလျှင် အခြေခံလစာ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံကို တစ်နှစ်အထိ ခံစားခွင့်ရှိသည်။
ဥပမာ - တစ်ရက်လုပ်ခ $24 ရသော အသင်၏ တစ်နှစ်အတွင်း ဆေးခွင့် (medical leave) သည် အရက် ၂၀ ဖြစ်သည်ဆိုကြပါစို့။
ပထမ ၁၄ ရက်ကို တစ်ရက်လျှင် $24 ဖြင့် ရှင်းပေးရမည်။
ကျန် ၆ ရက်ကို $24 ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သော $16 ဖြင့် ရှင်းပေးရမည်။
အကယ်၍ ယခုနှစ်၌ သင်သည် ဆေးရုံကို ၇၅ ရက်တက်ရသည်ဆိုပါစို့။
ပထမ ရက် ၆၀ ကို တစ်ရက်လျှင် $24 ဖြင့် ရှင်းပေးရမည်။
ကျန် ၁၅ ရက်ကို $24 ၏ သုံးပုံနှစ်ပုံဖြစ်သော $16 ဖြင့် ရှင်းပေးရမည်။
ဤတွင်လည်း ကုမ္ပဏီများက ဆေးခွင့် ၁၄ ရက်နှင့် ဆေးရုံတက်ခွင့် အရက် ၆၀ အတွက်သာရှင်းပေးလေ့ရှိကြပြီး ကျန်ရက်များကို မေ့ပစ်တတ်ကြပါသည်။ ဤသည်မှာလည်း အလီဘာဘာပင် ဖြစ်၏။
၂။ ဆေးကုသစရိတ် ခံစားခွင့်
ကုမ္ပဏီက အလုပ်သမားတစ်ယောက်အတွက် မတော်တဆမှုဖြစ်သည့်နေ့မှ တစ်နှစ်လျှင် စင်းဒေါ်လာ သုံးသောင်းခြောက်ထောင် $36000 ထိ အကုန်အကျခံ၍ ဆေးကုပေးရမည်။
၃။ တစ်သက်တာ မသန်မစွမ်းဖြစ်မှုအတွက် တလုံးတခဲတည်း ခံစားခွင့်ရှိသော နစ်နာကြေး (lump sum compensation for permanent incapacity)
၂၀၁၆ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက်နေ့မှစကာ ထိုခံစားခွင့်ကို အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းလိုက်ပါသည်။
အနည်းဆုံး = $ 88 000 x % permanent incapacity
အများဆုံး = $262 000 x % permanent incapacity
အနည်းဆုံး = $ 69 000
အများဆုံး = $204 000
% permanent incapacity ကို Work Injury Compensation Act ၏ First Schedule တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဥပမာ - ခြေထောက်နှစ်ချောင်းလုံး သို့မဟုတ် လက်နှစ်စလုံး ဆုံးရှုံးရပါက၊ မျက်စိကန်းပါက ၁၀၀% စသည်။
လွန်ခဲ့သော ၅ နှစ်ခန့်က ကယားလူမျိုးအလုပ်သမားလေးတစ်ယောက် အလုပ်ထဲတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ၍ ညာဘက် လက်ခလယ် တစ်ဆစ်ပြတ်သွားသည်။ ဤသည်ကို ဆေးရုံက လက်ပြတ်သည်ဟု ရေးမပေးဘဲ ပြတ်ရှရာဟုသာ ရေးပေးလိုက်သည်။ အနှီ ငနဲကလေးက ကျွန်တော့်ဆီဖုံးဆက်ကာ သူ့ဆေးစာများ၊ သူ့လက်ပြတ်ဓာတ်ပုံများကို ပြသ အကူအညီတောင်းလာသဖြင့် ကျွန်တော်လည်း ဒေါကန်ကာ သူ့ကိုခေါ်လျှက် MOM သို့သွား၏။ ဟိုရောက်တော့ အရာရှိကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြပြီး ဟောဒီမှာ ဆေးစာ။ ဟောဒီမှာ လက်ပြတ်။ မင်းတို့ကြည့်ချင်သပဆို ဖွင့်ပြမယ်ဆိုကာ ပတ်တီးကိုဆွဲခွာမည် ပြု၏။ သူက ဟိုးထားဆရာ ဆိုကာ ဆေးရုံကိုပြန်သွားကာ ဆေးစာပြန်ပြင်ရေးခိုင်းရန် ပြော၏။
ကျွန်တော်လည်း မကျေမချမ်းနှင့် ဆေးရုံသို့သွား၏။ ထိုဆေးစာရေးပေးသည့် ဆရာဝန်မရှိ။ အတော်လေး ပက်ပက်စက်စက် ပြောဘို့ မောင်းတင်သွားသော ကျွန်ုပ်မှာ ဆရာဝန်ကို မတွေ့ရတော့ အတော်ဟိုက်သွားသည် ဟူသတတ်။
ဟုတ်ကဲ့။ ဆေးရုံနာမည်ကတော့ West Point Hospital ပါတဲ့။ ကော်ပိုရေးရှင်းဒရိုက်မှာ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
မိမိတို့အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်ခြင်းမခံရစေရန်၊ ရစရာရှိသည်များကို အပြည့်အဝ ရစေရန်ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အလုပ်သမားများကို ဟောပြောပွဲလုပ်ရန် ယခင် သံမှူးကြီးဒေါ်ထွေးရှိစဉ်က (ဒုအတွင်းဝန် - ဒေါ်စန်းစန္ဒာဝင်းလည်းပါ၏) ကျွန်ုပ်တို့ စည်းရုံးကြည့်ဖူးပါသည်။ သို့သော် အလုပ်သမားအများစုမှာ စိတ်မဝင်စားကြပါ။
သူတို့နေရာအဆောင်ထိသွားပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဟောပြောပွဲလုပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ဖိုးပြောချင် ကျွန်ုပ်တို့မှာသာ အစောကြီးသွား။ မိုက်တွေမက်တွေပြင်။ ပရော်ဂျက်တာတွေထိုး။ စားစရာသောက်စရာတွေ တန်းစီချနှင့် တက်ကြွနေသည်။ မိုက်ကြီးနှင့် တဂေါ်ဂေါ် အော်နေတာတောင် ကိုယ်တော်တို့က အားနာပါးနာလေးတောင် ထွက်လာဖော်မရ။ ဒေါ်ထွေးကတော့ အေးလေ၊ နားရက်ဆိုတော့ သူတို့လည်း အေးအေးဆေးဆေး နားချင်ရှာမှာပေါ့ ဟု ပြောပါသည်။
ယခုလည်း ကျွန်ုပ်မှာ မနေနိုင်လို့ အချိန်ကုန်ခံ၊ မျက်စိညောင်းခံ၊ ဇက်ကြောတက်ခံ၊ အိပ်ရေးပျက်ခံကာ ရေးသာရေးရသည်။ မည်မျှ အကျိုးရှိမည်မှန်း မသိပါ။
အဲသဟာကြောင့် တော်ပါပြီ။ လိုချင်တဲ့သူတွေယူ၊ မလိုချင်တဲ့သူတွေ နေပေါ့။
၂၂ မေလ၊ ၂၀၁၉
Labels: Working in Singapore, စင်ကာပူအကြောင်း
ညာတာ ပါတေး (၂)
ညာတာ ပါတေး (၁)
ရှေးထုံးဆိုသော်လည်း ပယ်သင့်ကပယ်ရလိမ့်မည် ဆိုခြင်းအ...
PEL အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ကျွန်ုပ် ဖနောင့်နှင့်ပေါက်ချင်မိသူ တစ်ယောက်အကြောင်...
ကျွန်ုပ်နှင့် လေယာဉ်ပျံဖြင့်ခရီးသွားခြင်း အကြောင်း...